कालिज पालेरै महिनामा यति लाख कमाइ, किन जाने विदेश ? एउटै अन्डाको पर्छ पन्ध्र सय रुपैयाँ, सबै नेपालीले हेर्नुहोला – Complete Nepali News Portal
कालिज पालेरै महिनामा यति लाख कमाइ, किन जाने विदेश ? एउटै अन्डाको पर्छ पन्ध्र सय रुपैयाँ, सबै नेपालीले हेर्नुहोला
ललितपुर । पछिल्लो केही समयदेखि नेपाली युवाहरु कृषि पेशामा लागिरहेका छन र बिदेश जाने युवाहरुको लागि उदाहरण पनि बनिरहेका छन । आज हामी पनि त्यस्तै ललितपुरका एक युवाको बारेमा कुरा गर्दैछौ । ललितपुरको लुुभु भन्ने ठाउमा एउटा कालिज फार्म रहेको छ जस्का संचालक हुन पुश्कर जंग थापा । उनले यो ब्यवसाय गर्न लागेको करिब २ बर्ष पुुग्न लागिसक्यो र उनले पाल्ने कालिज युरोप फ्रान्समा पाइने कालिजको जाति छ जुन अहिले उनी यसबाट मनग्य आम्दानी गरेका छन ।
करिब ३ हजार जति कालिजका जातीहरु फ्रान्सबाट मगाएका दाबी गर्छन यि युवा । सुरुमा पाच सयबाट सुरु गरेका पुश्करले कालिज बेचेर अहिले जम्मा ५० मात्र रहेको जानकारी गराएका छन । कालिजकै दानाहरु खुवाएर पालिरहेका छन र साथमा घास पनि खुवाएर पालेका छन कालिजले । बेला बेलामा क्याल्सियम, भिटामिन र प्रोटिनहरु खुवाइरहेका जानकारी पनि गराए ।
कालिज पाल्नकै लागि अलि बढी खर्च हुने पनि जानकारी गराउछन र सुरुसुरुमा यसको सुरुवात गर्दा करिब ५० लाख जति खर्च लागेको पनि खुलाए पुश्करले । र हावातालमा र अरुको देखेको भरमा सिकेको भरमा र युटयुब भिडियोको शिर्षकको भरमा यस पेशामा नलाग्न आग्रह गर्छन । सकेसम्म बुुझेर सबै कुरा अगाडि बढाउन सल्लाह दिए, हेर्नुहोस —